यो भाइरल तस्विरको सत्यता थाहाँ पाउदा जो कोहिलाई पनि भाबुक बनाउछ ! | समाचार
यो भाइरल तस्विरको सत्यता थाहाँ पाउदा जो कोहिलाई पनि भाबुक बनाउछ !
September 6, 2021 NepstokLeaveaComment on यो भाइरल तस्विरको सत्यता थाहाँ पाउदा जो कोहिलाई पनि भाबुक बनाउछ !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एक तस्विर खुब भाइरल भइरहेको छ । सो भाइरल तस्विरको सत्यता थाहाँ पाउँने सबै भावुक भइरहेका छन् । भनिन्छ नि मान्छेको दिन दशा बाजा बजाएर आउदैन हो त्यस्तै भएको छ यो जोडीलाई पनि गर्भवती श्रीमतीलाई यी श्रीमान फोटो सुट गराउन गए ।
सायद यो खुसि भगवानलाई मन्जुर थिएँन होला ? श्रीमान श्रीमती फर्कदा कार दुर्घटना परे यता श्रीमतीको मृत्युको मुखमा छ’ट्प’टयाउदै आफ्नो बच्चालाई जन्मदिएर यो संसार बाट बिदा भाईन । आज हामी त्यसका बारेमा तपाईंलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौं । यस्तै एक भावुक तस्विर अहिले अमरिकाबाट सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ श्रीमतीले बच्चा जन्माउनु भन्दा पहिले श्रीमानसँग प्रसूति फोटोसुट गराएकी थिइन् । प्रसव भन्दा ठीक पहिले (फोटोशूटपछि) श्रीमती एक कार दुर्घटनामा नराम्रोसँग घाइते भइन् ।
डाक्टरहरुले कुनै न कुनै रुपमा श’ल्य’क्रि’या गरेर डेलिभरी गराए । भावुक कुरा के भने ती महिलालाई बचाउन सकिएन । छोरीलाई जन्म दिएपछि अस्पतालमै उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । त्यसको एक वर्षपछि बुबाले ठीक त्यहीँ ठाउँमा गएर आमाको तस्विरसँग फोटोशूट गराएका हुन् । क्यालिफोर्नियाका ति व्यक्तिको नाम जेम्स हो ।
एक वर्ष पहिले कार दुर्घटनामा श्रीमती गु’माएर छोरी पाएका उनले तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भावुक कुरा लेखेका छन् । तस्विरसहित क्याप्सन लेखेका छन, ‘मेरी छोरी, यदि तिमीले आज आफ्नी आमालाई भेट्न सक्थ्यौ, जो यहाँ भएको भए संसारको सबैभन्दा खुशी आमा हुन्थिन् ।’
आफ्नी श्रीमतीलाई याद गर्दै उनले लेखेका छन, ‘जुन दिन तिमीले छोड्यौ, मैले मेरो एउटा हिस्सा गु माएँ तर त्यो टुक्रा फिर्ता पाएँ ।’ उनी अगाडि थप्दै भन्छन्, ‘तिम्रो सम्मानमा हामीले हाम्रो छोरीको पहिलो जन्मदिन फोटोशूट गर्‍यौं । मलाई आशा छ भगवान जान्नुहुन्छ, उहाँ एक अद्भुत परी हुनुहुन्छ ।
भगवानले हामीलाई अहिले सम्म रक्षा गर्नुभएको छ र त्यसो गर्न जारी राख्नुहुनेछ । यदि तिमी देख्न सक्थ्यौं कि हाम्रो छोरी तिमी जस्तै देखिन्छ, उनी तिमी जस्तै राम्री र सुन्दर छिन् ।’ छोरीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन, ‘मलाई थाहा छ तिम्री आमा तिमीलाई हेरिरहनुभएको छ ।’
रोमानियामा नेपाली पुरुषका लागि खुल्यो रोजगारीको अवसर, काठमाडौमा कहाँ राख्ने सम्पर्क ?
रातभरि परेको अविरल वर्षाका कारण घर भ त्किँदा रोल्पामा बालिकासहित दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते
September 21, 2021 Nepstok
अब मोबाइलको भिडियोमा मात्रै बो’ल्नेछन् भर्खर हिड्न थालेका उनका छोराछोरी
September 22, 2021 Nepstok
खोपको असर वैदेशिक रोजगारीमा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप नपाए कोटा कटौती हुने ।
July 6, 2021 Nepstok